ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်နည်း- မင်းရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို နှေးကွေးစေတဲ့အရာ
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် အရေးကြီးသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ဘယ်လိုအရှိန်မြှင့်မလဲ။
ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် နှေးကွေးခြင်းကို ဘာကဖြစ်စေသလဲ
သဘာဝအတိုင်း ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် အဘယ်အရာက ကူညီပေးနိုင်သနည်း။
အဘယ်ကြောင့် Metabolism ကိုအရှိန်မြှင့်သနည်း။
ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး အဆီလောင်ကျွမ်းစေသော ဖြည့်စွက်စာ
Black က Mambae
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ဖို့ ဘာစားရမလဲ
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
အစာရှောင်ခြင်း နှင့် ဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်း
ရန်သင်ယူ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ လိုချင်သူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိထိရောက်ရောက် လောင်ကျွမ်းစေတယ်။ အဆီ ဖြစ်နိုင်တယ်
Um အရှိန်မြှင့်ဇီဝြဖစ် ပိုမြန်ကြောင်းသေချာစေတယ်။ ကွမ်းခြံကုန်း အစစ်အမှန်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမှာပါ။
ဤဆောင်းပါးတွင်၊ သင်သည်သင်၏အရှိန်မြှင့်ရန်ထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ ဇီဝြဖစ် အမှန်တကယ်တော့ အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ကြည့်!
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့် လိုချင်သူတွေရဲ့ ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဝိတ်ကျပိုမိုလျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်။
ထို့ကြောင့်၊ သူသည် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများအတွက် အဓိက ဖော်မြူလာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု မြန်ဆန်လေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလေ ဖြစ်သည်။
သိချင်တဲ့လူတွေ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမြန်စေပုံ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် သင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို အဆက်မပြတ် စားသုံးခြင်း၏ ကိစ္စဖြစ်သည်။ အစာ နှင့် thermogenic ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြည့်စွက်စာများ။
Metabolism သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုအစုအဝေးအတွက် ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြောင်း သေချာစေပါသည်။ အင်အား နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအောင်မြင်လိမ့်မည်။
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဇီဝမော်လီကျူးပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် မော်လီကျူးများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းစသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမျိုးမျိုးသော တုံ့ပြန်မှုများမှတဆင့် လုပ်ဆောင်မှုများစွာရှိသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အဆီမော်လီကျူးများကို ဖြိုခွဲသောအခါ စွမ်းအင်ပမာဏ ပိုများလာပြီး ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု မြန်ဆန်လေ၊ မော်လီကျူးများ ကွဲထွက်ချိန် နည်းပါးလေဖြစ်ကာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလေဖြစ်သည်။
ဘယ်သူပိုင်လဲ။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ဟန့်တားသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် အခက်အခဲများစွာရှိပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် ယင်းဆဲလ်များ ပိုမိုစုပုံလာစေသည်။
>>> ဖတ်ရန် လက်သည်းကိုက်သံကိုအိမ်တွင်းကုသမှု - အကောင်းဆုံးသူများကြည့်ရှုပါ။
နှေးကွေးသော ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်ရှာဖွေရန် အရေးကြီးပြီး သင်အမှန်တကယ် ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ပထမဆုံး သိထားရမှာက ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု နှေးကွေးခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တဲ့ ၊
မျိုးရိုးဗီဇ သို့မဟုတ် မျိုးရိုးဗီဇ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုသည့် အလေ့အထများကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
Hypothyroidism လို့ခေါ်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ကျစေပြီး အဆီစုပုံခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါ၊
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ လူတို့သည် တွန်းလှန်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်ဖြစ်သောကြောင့် မတူညီသော အလေ့အထများကို ချမှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အထိုင်များသည့်လူနေမှုပုံစံစသည့် အန္တရာယ်ရှိသော အလေ့အထများရှိသည့်အခါ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေသည့် လူနေမှုပုံစံ
သင်၏နှေးကွေးသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် ထိရောက်စွာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ လေ့ကျင့်ခြင်းသည် ဤအခြေအနေကို နောက်ပြန်လှည့်ရန် အရေးကြီးသော အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအဆီပိုများကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ၊ ကြွက်သားထု.
ထို့အပြင်၊ သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်၊ တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးနာရီများအတိုင်းအိပ်စက်ခြင်း၊ အချိန်မှန်စားသောက်ခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းဆေးများစားသုံးခြင်းနှင့်ပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအလေ့အကျင့်များစွာရှိသည်။
မြင်တဲ့အတိုင်း ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု ပိုမြန်တာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ကူညီပေးပြီး အချို့သောနေ့စဥ်အလေ့အထတွေကနေ သဘာဝအတိုင်း ပိုမြန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
အပူချိန်ထိန်းနိုင်သော အစားအစာများနှင့် ဖြည့်စွက်စာများကို နေ့စဉ်စားသုံးပါ။
တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး4ကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
တစ်နေ့ကို ၈ နာရီနဲ့ အချိန်မှန်အိပ်ပါ။
ဝေါဟာရ Basal ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်း အနားယူချိန်တွင် သို့မဟုတ် အိပ်သည့်အခါတွင် အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော ကယ်လိုရီပမာဏကို ရည်ညွှန်းသည်။
ထို့ကြောင့် Basal metabolic rate ကို အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် လိုအပ်သော ကယ်လိုရီ အနည်းဆုံး ပမာဏအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
ပိုမြန်သော ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုသည် သင့်အား ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန် ကူညီပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် စွမ်းအင်အတွက် အသုံးချနိုင်စေရန် အဆီပိုများကို လောင်ကျွမ်းစေသည်။
၎င်းသည် တက်ကြွသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုဖြင့် အဆီဖယ်ရှားရန်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
သင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု ပိုမြန်လေ၊ အဆီပိုလောင်ကျွမ်းလေလေ၊ ထို့ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုကျလေဖြစ်သည်။
>>> ဖတ်ရန် Cactinea: အဲဒါဘာလဲ သင်အမှန်တကယ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသလား ဒီမှာအရာအားလုံးကိုလေ့လာပါ။
ဖြည့်စွက်စာများ thermogenic ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် ကူညီပေးပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အရာများမှာ thermogenics များဖြစ်သည်။
ဒီလိုမျိုး ဖြည့်စွက် ပိုင်သောသူဖြစ်၏။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသော ဖြည့်စွက်စာများ အဲဒါအကူအညီ metabolism မြန်ဆန်စေသည် ၎င်းသည် စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ပိုကျစေပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အရာများအားလုံးတွင်၊ thermogenics များသည် အထိရောက်ဆုံးဖြည့်စွက်စာဖြစ်ကြောင်း သံသယရှိစရာမရှိပါ။
အချို့ ဖြူဖြူ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့တွင် ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ဖြည့်စွက်စာဆိုင်:
ယနေ့စျေးကွက်တွင်တွေ့ရှိရသောအထိရောက်ဆုံး thermogenic ဖြည့်စွက်ဆေးများမှာ-
Lipo6Black: အခြေခံ ဖြည့်စွက်စာ ကော်ဖီဓါတ် နှင့် segment တွင်ရေပန်းအစားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Black Mamba: သည် ကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်များကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ephedra-based thermogenic supplement ဖြစ်သည်။
EPH 50: ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက် မယုံနိုင်လောက်စရာရလဒ်များကိုထုတ်ပေးသည့် ephedra မှပြုလုပ်သော နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်စာ
အစွမ်းထက်၏။ Thermogenic ဖြည့်စွက်စာ, EPH 50 – KN အာဟာရကို ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်လိုသူတိုင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် လူအများက ယူဆကြသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် လူသိများပြီး အလွန်အစွမ်းထက်သော ပါဝင်ပစ္စည်း ပါ၀င်သော ephedra extract သည် ကယ်လိုရီအသုံးစရိတ်ကို တိုးမြင့်ပေးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံး အစာစားချင်စိတ်ကို လျော့ကျစေကာ အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ EPH 100 ဝယ်ပါ။.
eph 100 ဝယ်ပါ။
Black Mamba - ဆန်းသစ်တီထွင်သောဓာတ်ခွဲခန်းများ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် ဖန်တီးထားသမျှ သွင်းကုန် အပူချိန်အပြင်းထန်ဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန်နှင့် အမြန်ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများအတွက် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက် စွမ်းအားသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် များပြားသော အရာဖြစ်သည်၊ အဓိကအားဖြင့် ၎င်း၏ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ပင်၊ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှု ပြီးသည်နှင့်ပင် တစ်နေ့တာလုံး အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Black Mamba ဝယ်သည်.
၎င်းသည် သံသယမရှိဘဲ အကျော်ကြားဆုံး thermogenics များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အဆီလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးအများဆုံး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Lipo6Black - Nutrex သည် အားဖြည့်ဆေးဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသည်။အလွန်ထိရောက်မှုရှိသော ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါ၀င်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးပါသည်။
>>> ဖတ်ရန် ကပ်ရောဂါပြီးနောက် Thermogenic ဖြည့်စွက်စာများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
၎င်းသည် သမားရိုးကျ သာမိုဂျီ ဖြည့်စွက်စာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှု ယန္တရားတွင် အလွန်ထိရောက်သည်။ lipo6အနက်ရောင်ဝယ်ပါ။.
Stano Hard Anabolic သည် အကြိုဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ရေး Dual Phase၊ ဆိုလိုသည်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းအကြို (Black Capsule) အနေဖြင့် စွမ်းအင်တိုးရန် အလုံး 60 တွင် အလုံး 30 ပါရှိပြီး၊ ကြွက်သားပြန်လည်နာလန်ထူ (အနီရောင် Capsule)။
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပြီးပြည့်စုံပြီး အားကစားသမားဘဝ၏ အရေးကြီးဆုံး အခိုက်အတန့် ၂ ခုဖြစ်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး. ဒီဖြည့်စွက်စာရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Stano Hard Anabolic ကိုဝယ်ပါ။ .
stano hard anabolic ကိုဝယ်ပါ။
အပူချိန်ထိန်းနိုင်သော ဖြည့်စွက်စာများအပြင် သီးခြားအစားအစာများ စားသုံးခြင်းမှ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်စေသောအစာများနှင့် သက်ရှိများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသော တူညီသောဒြပ်ပစ္စည်းများပါရှိသည်-
သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ ဂျင်းနဲ့ ငရုတ်ပွနီတို့လို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေပါတဲ့ အစားအစာတွေက ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။
ဂွာရာနာမှုန့်၊ လက်ဖက်စိမ်းနှင့် ကဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့သော အချိုရည်များကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစားအစာများသည်လည်း ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေပါသည်။
ဘယ်သူနိုင်မလဲ။ metabolism မြန်ဆန်စေသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Thermogenic ဖြည့်စွက်စာအောက်ပါကဲ့သို့သော၊
စုဆောင်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာအဆီ
အစာချေဖျက်မှု ပိုကောင်းပြီး ပိုမြန်ပါတယ်။
သူ့မှာ ပိုကြီးတဲ့စိတ်ထားရှိပြီး စွမ်းအင်ပိုရှိပါတယ်။
အဆက်မပြတ် အစာရှောင်ခြင်း အလေ့အထသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဆီဓာတ်ကို စွမ်းအင်အဖြစ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောကြောင့် ပိုမိုထိရောက်သော ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု ပိုမြန်ပြီး အဆီတစ်သျှူးများကို အချိန်တိုအတွင်း လောင်ကျွမ်းစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာတွင် ကူညီပေးသည်။
ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်း၊ metabolism မြန်ဆန်စေသည် အဆီပိုများကို စွမ်းအင်နှင့် တစ်သျှူးများထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသောကြောင့် အချိန်နည်း၍ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချလိုပါက အရေးကြီးပါသည်။ ဖြည့်စွက်စာများဝယ်ပါ။ adipose လျင်မြန်စွာလျှော့ချလိမ့်မည်။
ဤစာသားတွင်၊ သင်သည် သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် အဓိက အကြံပြုချက်များကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
ဒီနေ့ ဆောင်းပါးကို ဘယ်လို သဘောကျလဲ။ ဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့် စျေးပေါသောဖြည့်စွက်စာများဝယ်ပါ။ : အဆီလောင်ကျွမ်းဖို့ အကြံပြုချက်များ
Tags:metabolism မြန်ဆန်စေသည်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုမြန်စေပုံဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။ဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်ဇီဝြဖစ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုThermogenic ဖြည့်စွက်စာဖြည့်စွက်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသော ဖြည့်စွက်စာများBasal ဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်းthermogenic